Shariif Xasan “Dowladda iyo Maamulada Hawada ayay heystaan, Shabaab ayaa dhulka naga heysta” – Hornafrik Media Network
adaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay dhibaato weyn ku qabaan Al-Shabaab, isagoo xusay in mas’uuliyiinta oo dhan ay iminka diyaarad saaran yihiin oo aanay dhulka mari karin.
Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo maamulada ay heystaan Hawada, halka Al-Shabaab ay heystaan dhulka sida uu yiri.
“Dadkaan dhamaantood diyaarad ayay saaran yihiin, runtii markaan fiiriyay dowladda Soomaaliya iyo maamulada hawada ayay heystaan dhulkiina Al-Shabaab ayaa naga heysta, waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno sidii aan dhulka u qabsan laheyn”ayuu yiri Shariif Xasan.
Waxaa uu sheegay in aan horumar iyo wax kale laga fikiri karin, inta Al-Shabaab dhulka heystaan, isla markaana aanan deegaanada kale la isaga gudbi karin.
Shariif Xasan ayaa qiray in Baydhabo iyo Muqdisho aan gaadiid lagu tagi karin, sidoo kale waxaa uu caddeeyay in deegaanada kale ee gobolada dalka ay la mid tahay.
Waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in laga faa’ideysto dareenka shacabka, isla markaana Al-Shabaab meel looga soo wada jeesto.
“Shalay hadii dadka ay Diin u qaldi jireen, maanta banaanka ayay u soo baxday dadkii dhan waa naceen, waxaa la rabaa in laga faa’ideysto in aan anagoo dhan meel uga soo wada jeesano amniga wax uga qaban laheyn”ayuu yiri Madaxweyne Shariif Xasan.
Madaxda dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalintii 3aad shir uga socda magaalada Muqdisho, waxaa lagu wadaa in shirka laga soo saaro war murtiyeed.